हाम्रो भिन्नता - SAINTYOL खेल कं, लिमिटेड।
SYSTURF घाँसलाई के फरक बनाउँदछ!
यो राम्रो प्रश्न हो, यसलाई तपाईंको लागि जवाफ दिनुहोस्!
SAINTYOL खेल कं, लि। (SYSTURF) वर्तमानमा, हामीसँग 55 55 पेटेन्टहरू छन्। कृत्रिम टर्फको अनुसन्धान, विकास, निर्माण र बिक्रीमा विशेषज्ञता। कम्पनीको production०,००० वर्ग मिटरको आधुनिक उत्पादन आधार, दुई तार रेखाचित्र अड्डाहरू, एक रबर र प्लास्टिक उत्पादन आधार, एक लन उत्पादन आधार र एक बाड़ उत्पादन आधार छ। त्यहाँ एक पेशेवर डिजाइन टीम छ जुन २० भन्दा बढी वर्षको अनुभवको साथ काम गर्दछ, व्यापक कृत्रिम लन उत्पादनहरू, ल्यान्डस्केपि। र खेल क्षेत्र डिजाइन र सेवाहरू प्रदान गर्दै।
यी हाम्रो शीर्ष best उत्तम कारणहरू छन्
SYSTURF घाँस उत्पादनहरूमा to देखि १ years वर्षको वारेन्टी
BASF & DOW द्वारा संचालित सामग्री
विभिन्न महाद्वीपीय जलवायुको लागि उच्चतम सम्भव यूभी उपचार
टेलर-मेड अनुकूलन तपाईंको व्यक्तिगत आवश्यकताहरूको लागि
तपाईंको व्यवसाय योजनाको लागि भरपर्दो अनन्य साझेदारी
SYSTURF पैसाले किन्न सक्ने सबैभन्दा प्राकृतिक देखिने कृत्रिम घाँस प्रदान गर्दछ। पर्यावरण मैत्री, टिकाऊ र टिकाऊ। एक ठोस वारेन्टी, सुरक्षा सामग्री र ग्राहक सेवाको साथ एक उच्च गुणवत्ताको उत्पादन हाम्रो मूल्य ब्याक अप गर्न।
SYSTURF का साथ काम गर्नाले तपाईंको बगैंचा कायम राख्न तपाईंको समय, पैसा, पानी र सामग्री बचत हुनेछ। तपाईं बस पछाडि बस्न र आराम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको सुन्दर र सँधै हरियो बगैंचा पूर्णको मजा लिन सक्नुहुन्छ!